mma မှာ မော်ဒရိတ်တာ ဘယ်နှယောက်ရှိလဲဟင် .. စိတ်မဆိုးနဲ့ သိချင်လို့ပါ…
Your comment is awaiting moderation ဆိုတာ အခုစောင့်နေတာ ၂ နာရီကျော်နေပြီး အခုထိလဲ moderation
တုန်းပဲရှိသေးတယ် … အဟင့်
အများကြီးရှိတယ်ထင်ပါ့။ သူတို့တွေလဲ သူတို့အရေးတွေနဲ့ရှုပ်နေမှာပေါ့။ ကြားမှ ငခါးဝင်လုပ်ကြည့်တာ ဟီး
သီခြင်းတွေ တင်ချင်ပါတယ်၊။ ဘယ်လိုတင်ရမလဲ။ tutorialထဲ ကအတိုင်းကမဖြစ်ဘူး။ အဲ့ဒီ w-p ထဲကိုဘယ်လိုဝင်ရမလဲ။
classical ရေ myanmarmp3album.com/wp-admin/ အစ်ကို တောင်းတဲ့လင့် ခ် ပါ ခင်ဗျာ
http://myanmarmp3album.com/wp-login.php?loggedout=true classical ရေ အစ်ကို တောင်းတဲ့လင့် ခ် ပါ ခင်ဗျာ
ကျေးဇူးပဲ မောင်ဖုန်း ရေ။
post တင်ရင် artist name အသစ် ကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲဗျာ။ list ထဲမှာမပါတဲ့ အဆိုတော် ထည့်ချင်လို့ပါ။
မြန်မာ့မဟာဂီတ ဆိုပြီး category အသစ်တခုဖွင့်ပေးစေချင်ပါတယ်။
Categories အသစ်ထည့်နည်း ခေါင်းစဉ်အောက်က ပုံကိုအကြီးချဲ့ကြည့်လိုက်ပါအစ်ကိုရေ ..အဆင်ပြေပါစေ …
အဆင်မပြေပါ။ wp-admin post tab အောက်မှာ
category tab ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းမပါဘူးဗျ။ ကျွံတော်ပဲမျက်စိမောက်လားမသိ။ ကူကြပါအုံး ။
Dashboard မှာအရင်လို ပို့စ်တွေရေးလို့မရတော့ဘူးလား။ ဘာမှမမြင်ရပဲ အဖြူကွက်ကြီးပဲမြင်နေရတယ်။
ဟုတ်ပဗျာ၊။ post တော့တင်လို့ရတယ်။ တင်ပီးသားပိုစ် ကိုedit လုပ်လို့မရတော့ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အဖြူကွက် ပဲဖြစ်နေ တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။
ဟုတ်အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ ခဏလောက်စောင့်ပေးကြပါ။ အက်ဒမင်လုပ်ဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်ခုပဲပြင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ထပ်စမ်းကြည့်ပေးပါဦးနော်။ အဆင်မပြေရင် ပြန်ပြောပါ 🙂
ွှThank you admin. It works perfectly now.
May MMA be The best of the best for sharing music online.
dashboard ပေါ်မှာ categories အသစ်ဖွင့်တာမရှိဘူး admin ရ။ လုပ်ပါအုံး။
mediafire ကဒုက္ခပေးတယ်ဗျာ။ upload လုပ်လို့မရဘူး//
အစ်ကိုရေ up4vn.com , mirrorcreator.com တွေနဲ့ upload ကြည့်ပါလား။ အဲဒီမှာ hosting ဆိုဒ်တွေအများကြီးကို ထောက်ပံပေးပါတယ်။ Categories ကတော့ အစ်ကိုအနေနဲ့ access မရှိသေးဘူးထင်တယ်။ ဘာကို အုပ်စုဖွဲ့ချင်လို့ပါလဲ၊ နာမည်ပြောပြပေးပါ။
တက်နိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကနေ ဖွဲ့ပေးပါလိမ့်မယ်ဗျာ။
MP3 မင်္ဂလာဆောင် စုံတွဲသီချင်းကောင်းကောင်းလေးတွေတင်ပေးလို့ ရမလား။ Download လုပ်ချင်ပါကဖြင့် တင်ပေးစေလိုပါသည်။
သီချင်းပို့စ်တင်ဖို့ကို လုပ်တာ ပြထားတဲ့အတိုင်း Login ဘေးက register ဆိုတာမပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်းမသိဘူး
တကယ်လို့ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်လည်း မော်ဒရိတ်တာ တစ်ယောက်ယောက်ဆီပို့လို့ရမလားဟင်
အစ်ကိုရေ အခု mediafire ကဒေါင်းရတာအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ် ဖြစ်နိုင်ရင်ကူညီပါအုံး…..
[email protected] ကိုမေးလ်နဲ့ မိမိကြော်ငြာချင်သော အရာပစ္စည်းကို အကြောင်းအရာပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်ပြီး ပေးပို့နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ယဉ်နွယ်ဦး ရဲ့ ချစ်ချင်းဖြစ်တည်ရာ English version လေး သိပါရစေဗျာ.. thanks
THIS NEW SITE IS SO BAD TO USE.
ညီ၊ အစ်ကို မသိရင်အရင်မေးကြည့်ပါ။ ကိုယ်မလုပ်တာ မသိတာကို သိအောင်ကြိုးစားကြည့်ပါ။ သို့မဟုတ် ကူညီနိုင်တဲ့ လူကိုရှာပါ။ ကိုယ်ဘာသာ အဆင်မပြေတာ၊ မလုပ်တက် မကိုင်တက်တာကို စေတနာသက်သက်နဲ့ လုပ်ပေးတဲ့ လူရဲ့ စိတ်ထားကို မစော်ကားပါနဲ့။ ဒီဆိုက်က တက်နိုင်သမျှကူညီပေးနေတာက ကိုယ်လို သီးချင်းနားထောင်တာ နှစ်သက်တဲ့လူတွေကို အဆင်ပြေပါစေတော့ ဆိုပြီး ဦးတည်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာပါ။ ဆိုက်ဒ်ကို အတက်နိုင်ဆုံးကောင်းအောင် လူတိုင်းအဆင်ပြေပြီး သီချင်းတွေဒေါင်းယူနိုင်အောင် ပေးနိုင်တဲ့ အချိန်လေးတွေကို ယူပြီးလုပ်ပေးနေတာပါ။ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှ ထောက်ပံပြီးရပ်တည်နေတာမဟုတ်ပါ။ မကောင်းဘူးလို့ ပြောမယ်ဆိုရင် အကောင်းမြင်တဲ့ သဘောနဲ့ အဆင်ပြေနိုင်မယ့် အကြံဥာဏ်လေးပေးပေါ့ဗျာ။ ကျနော်တို့ရဲ့ တာဝန်ခံက တက်နိုင်သမျှဆောင်ရွက်ပေးဖို့ အသင့်ပါ။ အရမ်းကာရော မပြောချင်ပါနဲ့ဗျာ။ စေတနာကို တန်ဖိုးထားတက်ရင် ဒီမှာရှိနေတဲ့ လူတွေက ပျော်ရွှင်မိမှာပါ။
ကူညီပေးလို့ ရတာဆိုရင် ရေးထားခဲ့ပါဗျာ။
Audio Converter (fre:ac) is totally free to ease for multitask like
Completely free and open source withoutacatch,
I would like to request to get the following song by Sin Htee Sine..ပါရမီဖြည့်ဖက် – စိုင်းထီးဆိုင် some body is able to upload for me .. Thank u so much 🙂
အဲဒီ link မှာရှာတာတွေ့ဘူး
ပါရမီဖြည့်ဖက် – စိုင်းထီးဆိုင်
ယူတုကနေပြီးတော့ သွားဒေါင်းယူလိုက်ပါဗျာ။ အဆင်မပြေရင် သီးသန့် ကျနော်တင်ပေးပါ့မယ်။
MP3 လိုချင်တာ…သီးသန့် တင်ပေးမယ်ဆိုရင်.. အတိုင်းအထက်အလွန်ပါပဲ 😀 thank u so so much
အဆင်ပြေပါစေဗျာ။ စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ သခင်ဆီအပြေးပြန်လာမယ်အယ်ဘမ်ကိုလည်း နောင်များ ပြန်တင်ပေးပါ့မယ်။
Admin koakyan pay chin tar lay shi lo par…
MMA home page mhar SEARCH BOX lay htae pay say chin par tal. nout p homepage mhar pal LOGIN button htae pay par oo help page win p login nay ya lo. THX
A sin pyay lar mar par. Admin lal de ta law busy nay lo htin del bya. A kaung sone tay lot pay twar mar par. Kyay Zu pal Byar.
သွားတော့ မိုးရယ် ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး လိုချင်လို့ပါ
မိမိုးကို – အဲလက်စ်
ဟုတ်ရင် mp3 ပြန်ရှာပေးမယ်ဂျာ။
အဲလက်စ် – မိမိုးကို
နောက်ပိုင်း တင်တဲ့ပို့စ်ထ်တွေမှာ မန့်ချင်တာ ဘယ်လိုမန့်ရမလဲ ပြောပြပေးပါ။ မန့်ရမယ့် နေရာ ရှာမတွေ့လို့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါအိ။ စကားမစပ် Funeral For A Friend (conduit) အခွေမှာ စကားဝှက်တောင်းနေပါတယ်။ ကူညီကြပါ ရွာလူကြီးတို့ရေ။
I am sorry. Rar file pass : 2012
“MMA မှသီချင်းနှစ်သက်သူများအား အသိပေးခြင်း”
သီချင်းနားဆင်တာကို နှစ်ခြိုက်ကြတဲ့ သီချင်းချစ်သူတွေအတွက် ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာကနေ နားထောင်ချင်တဲ့သီချင်းတစ်ပိုဒ်ခြင်းဆီကို မြန်မာသီချင်းသာမက နိုင်ငံရပ်ခြားသီချင်းတွေကို တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ မေတ္တာရပ်ခံချင်တဲ့ အချက်လေးတစ်ချက်ကတော့ သီချင်းတွေကို တောင်းဆိုရာမှာ သီချင်းနာမည်နဲ့ အဆိုရှင်နာမည်တွေကို ဖော်ပြပေးပါ ခင်ဗျာ။ အချို့သော ခြွင်းချက်တွေကလွှဲရင် ကျနော်တို့တွေ တက်နိုင်သမျှ အစွမ်းကုန် ဖြည့်ဆည်းကူညီပေးသွားပါ့မယ်။ အမ်အမ်အေ ဆိုက် myanmarmp3album.com မှာလဲ အသစ်သစ်သော တေးစီးရီး၊ မရိုးသွားလေတဲ့ ခေတ်ကာလပိုင်းက ကောင်းမယ်နိုးနိုး ခံစားနားဆင်နိုင်မယ့် တေးအယ်ဘမ်များကိုလည်း အဆင်ပြေပြေဒေါင်းယူနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါ့မယ်။ အများအားဖြင့် အမ်အမ်အေ ဆိုက်ဟာ အယ်ဘမ်အလိုက်ဒေါင်းယူနိုင်အောင် ဦးတည်ဆောင်ရွက်တဲ့အတွက် တစ်ပိုဒ်ခြင်းဒေါင်းလိုလျှင် လိုအပ်တဲ့သီချင်းတွေကို သက်ဆိုင်ရာ စီးရီးမှာ ကွန့်မန့်ပေးပြီး တစ်ပိုဒ်ခြင်းလင့် ပြန်တင်ပေးနိုင်အာင် ရေးသားနိုင်သလို၊ ဖေ့ဘွတ်မှာ လာရောက် အသိပေးပြောကြားပေးနိုင်ပါတယ်။ အချိန်နဲ့အမှီ အဆင်ပြေအောင် ကျနော်တို့ ပြန်လည်ကူညီပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပေးသွားပါ့မယ်။ တကယ်လို့များ ကျနော်တို့ရဲ့ ရှာဖွေကူညီမှုမှာ အဆင်မပြေမှုတွေလေး တွေ့ရှိလာရင်ဖြင့် စေတနာကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းအားဖြင့် သည်းခံပေးစေချင်ပါတယ်။
အမ်အမ်အေ သီချင်းချစ်သူ အပေါင်း အဆင်ပြေကြပါစေ။
သူငယ်ချင်းတို့ ရေ ….
ဇော်ဝင်းထွဋ် ရဲ့ သူရဲကောင်းတို့ ကမ္ဘာ က ဘယ် အယ်လ်ဘမ်ထဲမှာပါတာလဲ …ကူညီပါဦးဗျာ…
ဘယ်အယ်လ်ဘမ်မှာလည်းမသိပါ။ အဲ့ဒီသီချင်းတော့ရှိပါတယ်။ ယူမလားခင်ဗျား။ ။
နက်ဖြန် (စံသွင် နမ္မတူ) သီချင်းလေတွေလိုချင်လို့
Pls help me to find this album chocolate yaung yay khae eain met
Thanks A Lot All My Friends…..
Pls help me to find this album (Chocolate Yaung Yay Khae Eain Met)
pls help me to find all my friend